Balbalikalai sangit shikchha
Posted by crazy.com2069 on August 31, 2012 at 10:20 PM
बाल बालिकालाई संगीत शिक्षा
एक समय थियो त्यो बेला, एक परिवेश थियो त्यो बेला । तेही समयको एक झल्को सम्झिन मन लाग्यो, यो बेला । बिहान उठे देखि आपूmले गर्नु पर्ने सबै काम गरेर घर आउँदा कोही बेला भात पाकेको हुन्थ्यो, कोही बेला हुदैन थियो । जे जस्तो छ, हत्तार–हत्तार खायो अनि लुगामा चिसो हात पुछ्दै हातमा किताब च्यापेर टाढाको स्कूल तर्फ हिड्यो । खुट्टामा चप्पल हुन्थ्यो पनि हुदैन थियो पनि । ढिलो हुन्छ भन्दै स्या–स्या, फ्या–फ्या हुदै कुद्यो । स्कूल पुग्दा एक घण्टी लागेर शिक्षक कोठामा प्रवेश गरिसकेका हुन्थे । बेलुका अलिक अबेर सम्म पढ्न बस्यो कि “सुत्–सुत् तेल सकिन्छ फेरी बिहान सबेरै उठेर एक मेलो सक्नुपर्छ ।” अलिक कामको चाप बढे स्कूल जानै नपाउने । “एकदिन स्कूल नजादाँ के हुन्छ ? काम नगरे माम खान पाउलास्् !” पहिलेका आमा बुवा यसो भन्नु हुन्थ्यो । तर अहिलेका आमावुवा ठिक उल्टो यसो भन्नु हुन्छ – “बावु ! यति होमवर्क गरिसक तिमीलाई यस्तो खानेकुरा किनिदिन्छु, स्कूल गयौं भने घुमाउन लान्छु, पास भयौ भने त झन जे भन्छैं तेही किनिदिन्छु ।”
पहिलेको जस्तो अहिलेको समय काहाँ छ र ? समय बदली सकेको छ । समय संगै मानिसको मानसिक्ता र सोचमा पनि परिवर्तन आएको छ । आजका बालबालिका गतिशिल छन । उनीहरुको हृदय जिज्ञासाले भरिएको छ । उनीहरुमा बौद्धिक क्षमता बढी छ । कम्प्यूटरको युग छ । यस्तो अवस्थामा “संगीत” उनीहरुका लागी सहयोगी बन्न सक्छ । किनकि संगीत बिज्ञान हो, संगीतमा अनुशासन हुन्छ, एक आनन्दमय वातावरण हुन्छ । जसले पूरा जीवननै तरंगित भईदिन्छ । केही क्षण मात्र गाउने, बजाउने गर्नाले पनि मन हल्का र शान्त हुन्छ । बालबालिका मात्र नभई ठूलाबडा पनि संगीतमा झुम्नले तनाब रहित हुन्छन् तत्पश्चात उनीहरुको मन पढाई अथवा सही ठाउमा उत्साहापूर्ण लाग्न सक्छ ।
कतिपयको भनाई के पनि छ भने – “संगीत सिकेर बच्चा बिग्रन्छ, पढ्दैन ।” तर यो बिलकुल गलत कुरो हो । संगीतले कसैको नोक्सानी गर्दैन । बरु संगीत त दुखेको घाउको मलम हो, टुटेको दिलको उपचार हो । जसरी हामी मूर्ति भित्र इश्वर नभएपनि श्रद्धापूर्वक पूजा गर्छौ, तेसरीनै संगीतलाई श्रद्धा पूर्वक लिने हो भने संगीत अभिष्ट फलदाता हो । बच्चा बिग्रनु वा नपढ्नुमा संगीतको कारण नभई अन्य कारण हुन सक्छ । जस्तै ः घरको वातावरण, ठूलावडाको ब्यवहार, गलत संगत आदी ।
घरमा बालकलाई सधै पढ्ने इच्छा जगाउदै पढ्ने उचित वातारण बनाईदिनु पर्छ । तपाई आफूचै टेलिभिजन अगाडी झूमेर बालकलाईचै उता गएर पढ भन्नु हुन्छ भने उसले कसरी पढ्छ ? अनि एकोहोरो उसलाई पढ्–पढ् मात्र भन्दा पनि उ दिक्क हुन्छ । तेही माथि एकभारी किताब तेतिनै मात्रामा उसको गृहकार्यमा पिल्सिदा उ तेतिकै थकित हुन्छ । यस्तो बेलामा बालकलाई पढाईका अलवा खेल्न र मनोरञ्जन पनि चाहिन्छ भनेर भूल्न हुदैन । पढाई र खेलपछिको समय जहाँ बालक यताउति कुद्ने वा अनावश्यक टि. भि. सिरियल हेरेर तेतिकै खेर जाने समयलाई सही सदुपयोग गर्नका लागी संगीत शिक्षा अतिनै उपयोगी र प्रभावकारी छ ।
संगीतभित्र शान्त र आनन्दमय वातावरण हुन्छ । जहाँ प्रवेश गरेपछि थकान र दिक्कपनलाई भूलेर बालक रमाई–रमाई संगीत शिक्षा ग्रहण गर्छ । अनि सुर, ताल र लयको नियममा बाधिदा उ अनुशासित र संस्कारित हुन्छ । संगीतले बालकलाई सृजनसिल हुन र सकारात्मक हुन प्रेरित गर्छ । जसले बालकको शारिरीक र मानसिक सौन्दर्यमा बृद्धि हुन्छ । यसैले त बालकलाई स्कूले शिक्षाको साथै संगीत शिक्षा पनि दिनु अति जरुरी छ ।
बालकको पूरा जीवन संस्कार, सहृदयता, मानबीय मूल्य मान्यताको रक्षा आफ्ना कला संस्कृति प्रति निकट, अरुलाई सम्मान गर्ने, गुरुजन प्रति आदरभावबाट नतमस्तक हुने, आमावुवा प्रति आदरभाब जागृत हुने, कोमल भावना अंकुरित हुने, मानब÷मानब बीच दया, माया, क्षेमा भाब उत्पन्न हुने, दोश्रो ब्यक्तिको सुख दःख महसुस हुने र भाबुक्ता, करुणा भाबबाट ओतप्रोत हुनमा संगीत शिक्षाबाट मद्दत मिल्दछ । उच्च स्तरको पढाई त छ तर मनमा भावना छैन, मानबता छैन, हृदय छैन भने यस्तो शिक्षा निरर्थक छ । बालबालिकालाई सरल हृदय बनाउनु छ भने, भावपूर्ण बनाउनु छ भने प्रथम शिक्षाको साथ साथै संगीत शिक्षामा पनि जोड दिनु आवश्यक छ । संगीत बाट दानब पनि मानब बन्न सक्छ ।
बालबालिकालाई कानफोडूवा संगीत अश्लील गीत आदीबाट परै राखेर संगीत शिक्षा दिइनु पर्छ । मधुर संगीत, बालपयोगी संगीत, सरल सुर लयमा गाउने, देशभक्ति, भजन, लोक संस्कृति र प्रकृतिका गीत मात्र सिकाउनु पर्छ । साथै बालकलाई संगीतको प्रराम्भिक ज्ञान संगै नियमित स्वर अभ्यासमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ । संगीतको लागी नियमित स्वर अभ्यास अति जरुरी छ । यसरी बालक अवस्थादेखीनै बिधिवत तवरले संगीत शिक्षा ग्रहण गर्नाले निश्चयनै उसले सफलता पाउने छ ।
संगीत भन्नले गीत गाउनुलाई मात्र बुझ्नु उपयुक्त हुदैन । यसको क्षेत्र काफी बिस्तृत छ । जस्तो गायन (शास्त्रिय, सरल शास्त्रिय, भाव), बादन (तवला, हारमोनियम, गितार, ड्रमसेट, मादल, बासुरी आदी) र नृत्य (कथक, तण्डब, लास्य, मोर्डन, लोक आदी) । यि तीनै कलानै संगीत कला हो । यि तीनै कला मध्ये जुनै कला भए पनि बालपयोगी, बाल हितकारी संगीत शिक्षा नै हुन । संगीत, साहित्य कला बिना मानिसको जीवन सेतो पानाझै सादा हुन्छ । यही खाली पानाझै जीवनमा कलाका रङ्गहरुले रङ्गाउन अनि बालकलाई देशको कर्णधारको रुपमा तयार पार्न “संगीत शिक्षा” एक महत्वपूर्ण कडी हो । अतः प्रत्येक बालबालिकालाई संगीत शिक्षा दिनु अति जरुरी छ । जय संगीत ।